किन हुँदै छ ओलीको चिन भ्रमण ? यस्तो छ राजन भट्टराईको खुलासा::News from Nepal
किन हुँदै छ ओलीको चिन भ्रमण ? यस्तो छ राजन भट्टराईको खुलासा
नेकपाका नेता डा। राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमण मुलुकको समृद्धिका लागि कोशेढुंगा सावित हुने दाबी गरेका छन् ।
ओली ५ गते चीन जाने छन् । भ्रमणका क्रममापारवाहन तथा यातायात सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न प्रोटोकलका साथै विभिन्न सम्झौता तथा समझदारी हुनेछ ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता डा। भट्टराईले पनि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नेगरी दुई देशबीच कागजपत्र आदान(प्रदान भइरहेका छन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा सडक, रेललगायतका पूर्वाधार क्षेत्रहरु, विद्युत, पर्यटन र सिँचाईको विकासका लागि कुराकानी हुने उनले बताए । भट्टराईले भने, ‘अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग १०बुँदे ऐतिहासिक सम्झौता भएको थियो । अब सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि आफ्ना प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको जोड छ । ‘मुलुकको समृद्धिका लागि यो भ्रमण कोशेढुंगा सावित हुन्छ’ उनले भने, ‘हुन त देश बनाउने हामी आफैंले हो, सहयोग सहायकमात्रै हो ।’
कार्यक्रममा परराष्ट्रविद एवम् पूर्वराजदुत डा। सुरेशचन्द्र चालिसेले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । अहिले नेपालमा स्थायी सरकार भएकोले सरकारले धेरै काम गर्न सक्ने जनतामा विश्वास रहेको पनि उनले सुनाए । उनले भने, ‘तर, अहिले फेरि राजनीतिक व्यवस्था कस्तो हुने भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ, यसले कतै आशंका पैदा गर्ने हो कि भन्ने डर छ ।’